Ufmaan fooyyee mirkaneessi
Dhugoomsa yoo dhaamsite, saajoon kabala baafataa irraa bada.
Dhugoomsi ji'atti al tokko raawwata.
Dhugoomsi torbanitti al tokko raawwata. Kun qindaa'ina durtiiti.
Amma dhugoomsi ni raawwata.
Ukaankaa filatamee faayiloota naqaman kuusu agarsiisa.
Title is: Fooyyee Karaarraa